WAA MAXAY JACEYL in Gabay iyo Geeraar Forum Yuku free message boardsUsername or E-mail:Password: ForgotPassword?
> Gabay iyo Geeraar
> WAA MAXAY JACEYL
Aug 17 05 1:57 PM
Waa suaal aadmigu ku soo noqnoqoto, markuu ruux weliba wax dareemo ama iftiin cishqi u ifo, sideeba jaceyl waxaa lagu tilmaamo dhawr waxyeeladood oo markaas ruuxa wax jaceli u sahlo inuu u adeegsado tilmaantaas. Marka laga faallooda jaceyl waxaa dhacda dood hor leh oo aan xal loo helin, inta badan dad baa waxay aaminsan yihiin amaba ku qanacsan yihiin inuu jaceyl yahay laba qafood ama lamaano cishqi isla wadaagay, ruuxba ruuxa kale noloshiisa ku qanacsan tahay, oo uu hayo hami joogta, dareen xad dhaaf ah iyo fir-fircooni hor leh uu dareemo markuu ruuxaas arko, islana wadagaan boogta xanuuneyso una baahan bogsiimo. Culimada cilmi nafsigu waa ay isku khilaafsan yihiin, hase yeeshee mid ayaa laysku raacay taaso ah inuu qofka la jacel yahay ugu qaalisan yahay dadka intiisa kale. Taasi waxay ku tusaysaa in ruuxa wax jaceli uu u qaalisan tahay naftiisa mida uu jacel. Kolkuu arageeda waayana ay ku abuurmayso murugo, tabar dari iyo wel-wel hor leh. Jaceylka aan ruuxna kula wadaagin ee goonida ah waa mid iyada/isaga u horseeda murugo, cidla, dareen laaan iyo dad naceyb. Waxaa ruuxaas ku beerma colaad joogta oo u hayo lamaano weliba. Wuxuu wax ka sheegaa wiil iyo gabar weliba oo isla socda, wuxuuna ku tilmaama erayada kuwa ugu xun-xun. Wuxuu ka war hayaa labada maanta isbaratay oo noloshooda isbedel saameysay. Wuxuu saxiibadiisa ku nacaa markay ka hadlaan kalgacalkooda, sheekooyinka noocaas ah uma dhadhanto aad u karaahiyeystaa. Midka jaceylku saameeya wiil iyo gabarba, waxay had iyo jeerba ku jiraan mowjada feker ah, himiladiisana wuxuu ugu baaqi dhigaa ruuxaa u jeclaa. Waxayna dib u soo celisaa xasuustiisa, waxaana ku abuurma xiisad kalgaceyl oo uu weligiis hilmaami doonin. Wiilka & gabadhaas waxay goaan ku gaaraan ayay fuliyaan, iyagoo kalsooni buuxda isu haya, waxa ay sameynaa uu yahay jaceylkooda. Waxay ka tashadaan ayahooda dambe iyo mustaqbooda siduu noqon doona. Maalinba maalinta ka dambeysa, waxaa u dhasha waa cusub oo tirsiigu yahay maalintey isbarteen inuu korodhay. Waxayna mar weliba is xasuusiyaan jaceylkay isu qabaan inuu sii xoogeystay, uuna yeeshtay weji cusub oo hor leh. Hadaba si kastaba ha ahaato, jaceylka oo soo laab-laabto waa mid ku dhisan aas-aas xoog leh, kaaso weligiisna noqdo mid isu keeno laba cid aan hashiis ka dhaxeyna, colaadna weligood dhextiil, reer cusub ka dhasha. Jaceyl maahan oo qura wiil iyo gabar oo is jeclaaday, mar-mar qaarkood wuxuu kaalin lixaad leh ka qaataa laba cid amaba ummadd aad isku af iyo dhaqan ahayn ayuu isu keenaa. Faaiido iyo qaasaro wuu leeyahay jaceyl laakinse waxyeelada ugu daran ee jaceylku keena waxaa weeye marka ugu horeysa aad dareentid inuu ku taabtay talaalkii jaceylka, taas oo micneeheeddu tahay xanuun cusub oo ku soo kordho oogadaa, jirkoo ku jajaba, niyad xumi, raashiinkoo ka godid, iyo is daryeel laaantaan jirkaada. Waa astaamaha jaceylka, markaad ruux jaceyl u qaadid, oo isna kuu ogeyn inaad dunida ku nooshayba. Jaceylka noocaas ah, waa midka ugu khatarsan intaad naftaad halis gelisid amaba dhaawac isu geysatid, mana ogaantid goortaad ficilkaas sameysay, sababtoo ah, damiirkaada oo maqan. Dakhtar ku daaweyn karo maleh, illaa aad ka heshid kii aad jeclaatay amaba aad codkiisa iyo aragiisa maqashid/aragtid taasi waa qasaaruu leeyahay jaceyl. Si aad naftaada u badbaasid waa inaad iska yareysaa feker joogta ah, nafsadaana mashquul ka dhigtaa adigoo ka shaqeeya xubnaha jirkaada aadana meelaha lagu jimicsado, amaba haddii aad heli kartid ruuxaad caashaqtayna waa inaad u soo bandhigtaa dareenkaaga, waa haddii aad isku meel ku nooshiinba, kana fogow aflaanta jaceylka daawashooda. Waayo qofka wax jecli waa u hiyikacaa waxaana ku saaida caleeya dhadhanka boholyowga badani ku mataansan yahay ee soo wajaha nolashiisa. Nolasha sidaas ah ee dareenka xun leh wuxuu ruuxa ku jiraa in mudda ah. Wayna adagtahay, mana sahlano sidii uu ku fahmi lahaa inuu illaahay durdurka jaceylka ka siin karo meel kale.Maskaxdiisa waxay u shaqeysee si kale kaaso ka dhex guuxaya rajo xun iyo burburka dhaawacay noloshiisa ee la soo daristay amaan xumi. Haddaba aan iraahdo jaceylku wax aan sahleyn, qaasatan dadkeena sida sahlan u isticmaalaan oo ah waxashnimo oo fool xun, iyadoo wiil iyo gabar erayga jaceyl u isticmaala si yaroo fudud, isagoo/iyadoo doonaya inuu dano gaar ah u ku fushida. Ha ku oran ruux aadan jaceyl u haynin waan ku jeclahay, si aad niyada ugu dhisto
jwb jaceylka wax uu yahay
Jan 5 08 1:34 PM
jaceylka waa raaxo marna rafaad sxb. hadaan kuu macneeyo runtii waxaa lagu micneen karaa siyaabo badan, anigoo soo gaabinaya micnaha guud ee jaceylka marka laga saaro jaceylka waalidka iyo mid walaatanimada ah, waxaa soo haraayo mid qura oo ah midka dhexmara wiil iyo gabar oo is jeclaadey jaceylkana sidiisaba wuxuu ku bilowdaa qusul wuxuuna ku dhamaadaa qusul ama murugo. war iyo dhamaantiisa anigoo warka kala jaraya waa wada raaxeysi dhexmara laba sheqsi ama lab iyo dhidig,jaceylkana wuxuu macaan noqon karaa marka gabadha aad jeceshahay aad hesho ama hanato aad si fiican ugu raaxeyso waxaan markaasi dhihi karnaa qoftaasi hebel si zaa'id ayey u jeceshay waayo waxaa meesha ka dhalanaayo jaceyl dhab ah. jaceylka wuxuu quutaa ama uu ku kobcaa sheeko iyo is aragti badan iyo waliba nofta aad jeceshahay aad ugu raaxeyso raaxada mida ugu sareysa. war iyo dhamaantiisa cidii dood ka qabtana jawaaabta waafiga ah aan ka bixiyey waa ka soo jawaabi karaa waxa ka qaldan ama aan ku saxanahay\_ jawaabtana iigu soo dir [email protected] wariiri
waa maxay jaceelka? jawaab
Jun 14 09 3:10 PM
Asc jaceeylka waa bacadal guur ama after married lakiin somalida waxee jaceeyl ku tilmaamaan guurka
ka hor ee dhahaan jaceeylka intiisa badan uu dhacaa lakiib wa been.
Guurka ka hor jaceeylka dhaco waxaa la dhahaa allot like a love waa qeeb jaceelka ka mid ah waxaa jaceeylkaaga dhadhamin kartaa oo ka bogan kartaa oo aadan ka
maarmin marka barato nolasha macaankeeda oo aad la qeebsato qofka aad jeceshahay ama aad soo dooratay ama lagu siiyay lakiin qofkaas wa inuu yahay qof
wanagsan oo gurigaaga kaaga dhigto guri jano ah oo marka soo gasho lagugu soo dhaweeyo oo mar walbo la faraxsan yahay lawada qoslaayo la wada sheekeesanaayo
xumaanta aan laga horkeenin hadee ee wax jiraan gadal laguugu dhigo si tartiib ah la isku fahmo ilmahaaga iyo xaaskaaga waqti aad siiso qofba hoosha meeshu
kasoo gaaro ka qabto oo markaa maqan tahay lagu tabaayo kaasaa guri jano ah markaa intaas u barato nolashaada sas u macanaato ayuu jaceeylka dhashaa iyo
dareenka oo aadan ka maarmin oo hada daqiiqad weeyso aad tabeeso oo aad waalaneeso ileen nolasha macankeeda dhadhamisay
Misaaal waxaa arkeesa islaan wayeel ah oo da'adeeda jirto 60 iyo oday wayeel ah asagana 70 jiro oo wali is jecel is ak fadhiyo hal sariirna kuwada seexdo
dadka waxee dhahaan war islaantaan iyo odagaan waaba waayeel ee maxee sariiraha u kala qaadan layihiin u wada fadhiyaan waaba marka uu jaceelka soo dago
waqtigaas uuba soo daagaa uu qofba qofka kale dareenkiisa la socdaa!!!!
Misaal kale waxa arkeeysaa labo qof oo ilma isku dhalay aan hadana is ak joogin oo kala magaalo jooga lakiin qofba qofka kale uu dareemaayo haduu jirado iyo
haduu cafimaad qabo adoon u sheegin hada ka qariso xata wuu og yahay waa waxyabaha aan la yaabay aniga qaas ahaan coz waqti waxaa isoo maray aabahee iyo
hooyadee mid aan la noola labadoodana kala wadan ku kala noolaa mudo badan markuu aabehee isoo waco uu i yiraaho war sidee tahay hooyadaa waxa dhihi jiray
ayadoo jiran ama xanuun san aaan ka qarin jiray si uusan u fakirin wee cafimaad qabtaa an uugu jawabi jiray asagoo hadalka igu soo celinaayo oo hadana
dareemaaayo uu i dhihi jiray cunada nocaas ka ilaali nocaas sii u dadaala u naxariista hadee jiran tahay yaan la iga qarin markee cafimaadka qabtana wuu la
socdaa su aasha iguma badato ya wax u sheegayy wa la yaab!!!! Marka jaceeylka wa guurka ka bacdi waxii ka horeeyaana wa qeeb jaceeylka ka mid ah qofka waxuu jaceeylkiisa dhameestiray markuu guursado diintiisana waxuu
dhameestiray markuu guursado wa kaas jaceelko loo ooyo loo aayo hada weeyso somaliyeey wsc wrx wbr
Oct 28 09 10:52 PM